Lahatsoratra nosoratan'i Samir Sampat
Ny fotoana dia ny zava-drehetra amin'ny raharaham-barotra. Mety ho ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpanjifa vaovao iray sy ny fanantonana azy. Tsy ampoizina fa ho tonga mpitarika varotra ianao amin'ny andrana antso an-tariby voalohany nataonao. Mety mila fisedrana vitsivitsy izany satria ny fikarohana sasany dia manoro hevitra fa afaka miantso hatramin'ny 18 alohan'ny hahatongavanao voalohany amin'ny telefaona. Mazava ho azy fa miankina amin'ny fari-piainana sy toe-javatra maro izany, fa iray ihany